कम्पनी खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ दर्ता गर्ने प्रक्रिया जान्नको लागि पढ्नुहोस ! – Palika Express
कम्पनी खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ दर्ता गर्ने प्रक्रिया जान्नको लागि पढ्नुहोस !
PalikaExpress ५ चैत्र २०७७, बिहीबार 595 पटक हेरिएको
तपाई कुनै उधम वा कम्पनी खोल्न चाहनु हुन्छ तर प्रक्रिया थाहा छैन भने यो लेखमा सबै तरीका बिस्तृत रुपमा लेखिएको छ । कुनै पनि उधम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग सामूहिक रूपमा मिलेर कम्पनी खोल्न सक्छन्। कम्पनी प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी गरेर तीन किसिमका हुन्छन्।यी मध्ये कुनै पनि कम्पनी खोल्नका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।कम्पनीको किसिम अनुसार दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू फरक हुन्छन्। यो लेखमा भने हामीले प्राइभेट कम्पनी कसरी दर्ता गर्ने ? (कहाँ गर्ने, प्रक्रिया, दस्तुर आदि) भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। प्राइभेट कम्पनी बढीमा ५० जनासम्म शेयरधनीहरु मिलेर खोलेको कम्पनी हो, साथै एकल शेयर धनी भएको कम्पनी पनि प्राइभेट कम्पनी अन्तर्गत पर्दछ।
प्राइभेट कम्पनी कहाँ दर्ता गर्ने!
कम्पनी दर्ताका लागि नेपाल सरकारले तोकेको निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। यस मध्य धेरै कामहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया यस्तो छ ।
कम्पनी दर्ता गर्दा सबैभन्दा पहिला प्रस्तावित कम्पनीको नाम प्रयोग भएको छ छैन चेक गर्नुपर्छ र नभएमा अनलाइन रिजर्भ गर्नुपर्छ। यसको लागि कम्पनी रजिस्टर कार्यालयको वेबसाइटमा जानुहोस्।
तपाईँले साइन इन लेखिएको ठाउँका खाली बक्सहरुमा त्यो नेम र पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि कम्पनीको नाम, ठेगाना, अधिकार, जिम्मेवारी, उद्देश्य, सेयर होल्डर आदिका बारेमा विस्तृत रूपमा लेखिएको प्रज्ञापनपत्र (एममोए) तयार गर्नुहोस्। साथै संस्थापकहरूको जिम्मेवारी ,व्यवसायको प्रकार आदिका बारेमा विस्तृत रूपमा लेखी प्रबन्धपत्र (एओए) तयार गर्नुहोस्।एममोए तथा एओए वकिल वा कानुन व्यवसायीले प्रमाणीकरण गर्छन्। कम्पनी आफैले पनि प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ।